MARCH EIGHT FI HAWWAN/DUBARTOOTA OROMOO – Oromedia
Home » Hawaasa » MARCH EIGHT FI HAWWAN/DUBARTOOTA OROMOO
Barreessan Sagni Belachew Duk
Dubartoota Oromoo Booranaa Jila Gadaa 2017
‘Dubartiin utubaa maatiiti; dubartiin utubaa biyyaati,’ jedha Oromoon. Kanaaf mirgaa fi angoo isaan aadaan qaban mullisuuf siiqqee isaan qabachiisa. Kabajaafi ulfina ilma namaa kamiifu isaan barbaachisu godhaaf . Sababni isaa dubartiin haadha, obbolettiidha, haadha warraati. Dubartii malee utubaan mana tokkoo bu’aa hin qabu. Bakka dubartiin hin jirreef gochi kamuu kan dubartii hin hirmaachifne ittoo sogidda hin qabne dha. Oromoonis kana waan hubateef osoo biyyoonni addunyaa irra jiran kanneen har’a mirga dubartii jedhanii faarsan dubartiif iddoo hin kenniin mirga dubartii kabajuu eegale.
Biyyoonni guddina irra jiraniif guddatan guyyaa dubartootaa March 8 dubartoota jireenya hawwaasummaa, siyyaasa, dinagdee keessatti.qooda fudhatanii darbaniif fudhachaa jiran akkasumas mata duree garagaraa kaasuun dubartoota faarsaaf kabajaa oolu. Guyyaan kun guyyaa itti dubartoonni dhiirota waliin mirga wal qixa qabaachuu isaanii irra deebi’anii haaromsan. Guyyaa itti dubartoonni kabajamuu akka qabaniif utubaa waa hundaa tahuun isaanii itti beeksifmuudha.
Dubartiin Oromoos waggaa 140 dura osoo Oromoon harqoota gabrummaa jalatti hin kufiin kabajaa dubartiin addunyaa kana irta jirtu hin argatiin argachaa turan. Gafas dubartiin Oromoo yeroo dubartoonni addunyaa biroo dhiitamaniif tuffataman kabajaan diinagdee, siyyaasaaf hawwasumma keesaatti qooda gudhachaa turan. Bara Oromoon kolonii jalatti kufee kaasee garuu haati ilmaan Oromoo kabajaa dhabde. Haadha dhiiraa tahuun ishee hafee haadha qoranii, haadha kasalaa taate. Namummaan tuffatamtee ulfina dhabde. Dubbatte mirga dhabde, falmatte
deebii dhabde, hojjette galii dhabde, deessee of jalaa dhabde.
Keessumaa bara jaarraa 21ffaa jedhamu kana keessaa biyya Xobbiyaa jedhamtu kan akka sirba giddi gabrummaa keenyaan gad dhaabbatte kana keessatti dubartiin Oromoo salphattee salphinaan jiraataa jirti. Har’a qofaa dhaabbattee boossi. Dubbin akka EBC fi OTV faan nutti baanan miti, isa isaanni mirgi walqixxummaa isaanii eegameeraf, micro xixiqqan gurmaa’anii jireenyi isaanii fooyya’eera, paakeejii extension fayyaarraa fayyadamo tahaniiru jedhanii hololan miti. Dhugaan jiru hawwan keenya salphina hamaa keesaa jiru.
Hawwan keenya warri dubartoota addunyaa dura mirgi isanii eegamaafii ture har’a ofii mirga hin qaban.Yeroo dubartoonni biyyattii biroof biyyoota addunyaa irra jiran guyyaa itti wan hundaan walaboomanii mirga isaanii isa dhiirootaan mulqaman itti argatan kabajan kanatti Hawwan Oromoo ulfa garatti baattee rasaan reebamaa jirti, qe’ee ishee irratti alagaan gudeedamaa jirti, osoo
ilaaltuu ilmoon ishee rasaasaan reebamaa jiru, mirga mulqamtee lafarra harkifamaa mana hidhaatti geefamaa jirti. Salphinni kun hawwan keenyatti guyyaa dhufee kaasee isaan illeen dhiirootaan qixa mirga isaanii deeffachuuf salphinaa isaaniif biyya isaanii Oromiyaatti dhufe falmachuuf guyyaan itti booda deebi’an hin turre.
Jarraa 19ffaa irraa kaasee baroota sagaltamoota keessa hanga har’aatti dubartoonni keenya qabsoo ummata isaanii irraa hafanii hin beekan. Diinni hamilee isaan cabsee jireenya hawwaasummaa, siyyaasaa fi polotika biyyati keessa moggaati isaan qabu iyyuu. Holola dharaan akka isaan kabajaa qaban fakkeessee xibaaru iyyuu. Dubartoonni keenya cimoon warreen dandeettii isaanii bara #AKKOO_MANNOOYYEE agarsiisan sun har’allee onneen isaanii hin shuntuurre.
Har’allee shimalaa qabtanii ilmaan isaanii waliin hiriiranii jiru. Alagaan kabajaafi ulfina isaan dhowwatee isaan salphisu iyyuu, alagaan qe’ee isaanii irratti isaan xiqqeessu iyyuu nuti ilmaan Oromoo kabajaaf ulfina isaaniif qabna. Kabajaa har’a dubartootni keenya dhaban kana bor akka isaan goonfachiifnu, salphina isaanii kana irraa mulqinee akka ol isaan qabnu shakkiin hin jirtu. Siiqqeen isaanii har’a ulfina dhabde, siiqqeen isaanii har’a kufte kun bor ol qabamtee akka isaanii durii sana imimmaan irraa haqamtee dubartoota addunyaan qixa gammachuun March 8 guyyaan kabajatan dhihoodha. Bor dubartiin addunyaa gammachuun yoo ooltu dubartiin Oromoo gaddaaf gadadoon oolti, dubartiin Oromoo madaa ishee kukulfachaa oolti, dubartiin Oromoo ilmaan ishee wareegaman yaadachaa oolti….guyyaan kun hundi itti darbu dhufaa jira…..Dubartiin Oromoo ulfina haa argattu! Dubartiin Oromoo haa kabajamtu! Dubartiin Oromoo haa jiraattu!
Previous: Guyyaa Ayyaana Durbartootaa
Next: Tapha Aadaa Oromoo